Forum serasera malagasy Ny bizna diso tafahoatra ataon'ny rahalahin'ny Filoha hajaina Hery - Dinika forum.serasera.org
Ny bizna diso tafahoatra ataon'ny rahalahin'ny Filoha hajaina Hery
Fitohizan'ny hafatra : Ny bizna diso tafahoatra ataon'ny rahalahin'ny Filoha hajaina Hery
rabaradaka - 24/10/2016 16:05
Misedra olana izahay atyItasy noho io Soamahamanina io, aryizay no tsy nahitana ahy elaela.
Ny marina dia izao : ny rahalahin'i Hery Rajaonarimampianina no ao ambadiky ny olana miseho eto Madagasikara amin'ny fitrandrahana volamena ataon'ny Chinois. Ity rahalahiny (izay tsy ho tononiko ny anarany) no mifehy ny fitrandrahana volamena eto Madagasikara. Tsy mahagaga raha mangina ny rahalahiny Hery Rajaonarimampianina.
Araho mangina ny tohiny ary io resaka ataon'ny rahalahiny io no hampiongana an'i Hery
andrywui - 25/10/2016 03:00
Sao de le rahalahiny oe pastera mou sa mopera iny zàny. ....
Iny no tena rambo amin'ny famoahana volamena eto Madagascar. .
endriny - 25/10/2016 06:23
Fa iza tamintsika zafindrakala moa leiretsy ry rabaradaka no nahazo tombony tamin'io volamena io hatramin'izay a? Toa ilay mpijirika mandalo no tena voky sy ireto mpandranto ireto. Iza tamintsika no nahavoaka kamiobe tamin'io?
Ny mpitati-bary any ambany andreafana aza mbola mahazo no isika eto Soamahamanina sy ny manodidina. Jereo ny fitanjozotry ny saretiny rehefa fararano, sady mihaingo labasy izay tsy izy. Ny antsika anefa darosy tsy misy kodiarana sy mavesa-taritina anaovana dava no mba misy, kanefa isika hoa akaiky volamena..
Mampisaina ny zava-misy
rabaradaka - 15/11/2016 11:36
marina aloha izay voalazanareo e, nandritra ny Tetezamita dia ry Mamy Ravatomanga sy Augustin Andriamanananoro no nitrandraka ny taty Soamahamanina, fetsy ry zareo fa tsy nampiasa fitaovana goavam-be. Izy roa lahy ireo ange no ao ambadik'io korontana io e !
I AINA ilay zandrin'i Hery Rajaonarimampianina no tena mamotika ny firenena, manampy azy i Mathieu zanaky ny filoha. Tena manao am-pihimamba mihitsy ry zareo